CHANEL 2.55 Double Flap Small Silver Chain Shoulder Bag Black Lamb c11 – hannari-shop
အသေးစိတ်ကိုကြည့်ရန် IN နှင့် OUT ကို Pinch ။
An authentic CHANEL 2.55 Classic Double Flap Small Silver Chain Shoulder Bag Black Lamb c11 This item is Contemporary. The year of manufacture would be 2000-2002.
ပိတ်သိမ်း - သော့ခတ်ပါ
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကွင်းဆက် - ငွေရောင် Tone
Serial Sticker: ပူးတွဲပါ
Serial #: 6730792 (စတစ်ကာပေါ်တွင်သာကဒ်ပြားမရှိပါ။ )
နှင့်အတူကြွလာ: ဖုန်အိတ်, Box ကို, စောင့်ရှောက်မှုစာအုပ်ငယ်
Outside:7of 10 - Very nice condition. The edges have scuff marks and have been repainted. Slight scratches.
Inside:7of 10 - Very nice condition and clean. Scratches. Scuff marks. No stickiness or peeling.
သိုင်းကြိုးနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ: 8 ၏ 10 - အနည်းဆုံးအသုံးပြုမှုနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေ။
ဖုန်အိတ်နှင့် Box - 8 ၏ 10 - အသုံးပြုမှုအနည်းဆုံးလက္ခဏာများနှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေ။
ခန့်မှန်းခြေ အရွယ်အစား: H5.4 "x W8.6" x D2.3 "(H13.8 x W22 x D5.9 စင်တီမီတာ)
ခန့်မှန်းခြေ ကွင်းဆက်နှစ်ချောင်းကြိုးသင့ ်၍: 9.6 "(24.5 စင်တီမီတာ)
ခန့်မှန်းခြေ ကွင်းဆက်တစ်ခုတည်းကြိုး - 17.5 "(44.5 စင်တီမီတာ)
အနံ့အကြောင်း - မှို - NO / ရေမွှေး - NO / စီးကရက် - မ
(အနံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့မှဆုံးဖြတ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ အနံ့ခံနိုင်လျှင်အ ၀ ယ်မခံပါနှင့်။ )
မန်းကိန်းသည်သင့်ထက်သေးငယ်နိုင်သည်။ သူမသည် US6အရွယ်အစားအဝတ်အစားများ ၀ တ်ထားသည်။ အဝတ်၊ မန်းကနင်နှင့် iPhone တို့မပါပါ။
ပစ္စည်းကိုတင်ပို့ပြီးနောက်မ ၀ တ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အခြားအိတ်တစ်ခုသို့မပြောင်းစေရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကိုလုံခြုံရေး tag တစ်ခုထည့်သည်။ သင်သည်ပစ္စည်းမှကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်အသားကိုသင်ဖယ်ရှားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပေးပို့မှုကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။